DKMG oo ku dhawaaqday Guddiga Wadajirka ah ee Roadmap ka (DHAGEYSO) – SBC
DKMG oo ku dhawaaqday Guddiga Wadajirka ah ee Roadmap ka (DHAGEYSO)
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr Abdiweli Mohamed Ali ayaa maanta ku dhawaaqay guddiga Wadajirka ah ee habraaca marxaladda kala guurka ah “Rodmap” 2011/2012. Dhaqangelintii Roadmap ka ayaa u socda si habsami ah iyadoo lagu guuleystay in wax badan laga qabtay howlahii uu tilmaamayey habraaca marxaladda kala guurka “roadmap” 2011/2012.
Link hoose ka dhageyso Afhayeenka xukuumada KMG Soomaaliya Eng. Yariisow oo saxaafada u akhriyey magacyada xubnaha gudigaasi.
Halkan ka dhageyso shirkii jaraa\_’id ee Eng. Yariisow